DEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Shir Deg-deg Ah Iskugu Yimid Saaka & Go'aamada La Filayo In Ay Ka Qaataan Man United, City & Chelsea - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Shir Deg-deg Ah Iskugu Yimid Saaka & Go’aamada La Filayo In Ay Ka Qaataan Man United, City & Chelsea
DEG-DEG: Kooxaha Premier League Oo Shir Deg-deg Ah Iskugu Yimid Saaka & Go’aamada La Filayo In Ay Ka Qaataan Man United, City & Chelsea
14 kooxood oo horyaalka Premier League ah ayaa shir degdeg ah iskugu yimid saaka oo Salaasa ah, waxaanay go’aan midaysan ka gaadhayaan waxa laga yeelayo saddexda lixda kooxood ee waaweyn ee Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Arsenal iyo Liverpool.
Lixdan kooxood ayaa waxay ka mid noqdeen tartanka European Super League oo ay si cad u sheegteen in ay qayb ka yihiin Axaddii iyagoo soo saaray war-saxaafadeedyo kala gooni ah iyo mid guud oo ay ku midaysan yihiin.
Naadiyada Premier League oo aanay ku jirin lixda kooxood ee waaweyn ayaa saaka si degdeg ah iskugu yimid, waxaana mar dhow la filayaa in ay soo saaraan bayaan.
Agaasimaha horyaalka Premier League ee Richard Masters ayaa kulankan guddoominaya oo iskugu yeedhay kooxaha, ayaa ajandaha bilow illaa dhamaad uu yahay in go’aan wada-jir ah laga qaato lixda kooxood ee Manchester City, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham iyo Arsenal.
Inta uu shirku socdo, waxa la qiimayn doonaa oo si wada-jir ah looga arrinsanayaa sidii jawaab midaysan looga bixin lahaa horyaalka European Super League iyo kooxaha qaybta ka noqday.
Arrinta xiisaha leh ayaa waxay tahay, in 14ka kooxood ay awood u leeyihiin in ay meel mariyaan qorshe-ciqaabeed oo la marsiinayo kooxahan, waa se haddii ay si buuxda iskugu raacaan.
Sida uu dhigayo sharciga Premier League, 14 kooxood oo Premier League ah ayaa u codayn kara, ama anisixin kara isbeddello waaweyn oo lagu samaynayo horyaalka ama shuruucda lagu maamulo horyaalka intaba.
Si kastaba, saacado kaddib ayaa la ogaan doonaa waxa ay isku raacaan kooxahan shiraya iyo haddii isbedello lagu samayn doono shuruucda, kuwaas oo lagu dhibaataynayo lixda kooxood ee waaweyn.